NamasteNEPALI.com: राज्यको ढुकुटीबाट एक दिनमै १ करोड ३१ लाख बाँडियो, कसले कति पाएँ ? (नामावलीसहित)
राज्यको ढुकुटीबाट एक दिनमै १ करोड ३१ लाख बाँडियो, कसले कति पाएँ ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीका आफन्त, नेता तथा पहुँचवालालाई राज्यको ढुकुटीबाट १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत असार २४ को बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रस्तावमा ७८ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो । सरकार आफैंले बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘विपन्न तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी कार्यविधि’ विपरीत सरकारले पुनः रकम बाँडेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले असारको पहिलो साता एकैदिन ३१ जनालाई डेढ करोड बाँडेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले २ सय ७२ जनालाई १५ करोड २७ लाखभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो । आर्थिक सहायता पाएकामा सबै पहुँचवाला नेता, प्रधानमन्त्री र नेताका आफन्त, कार्यकर्ता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र उच्च सरकारी अधिकारी बढी छन् । सरकारले गत असार अन्तिम सातासम्म एक वर्षमा पहुँचवालालाई वितरण गरेको आर्थिक सहायता रकम साढे १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
उक्त रकम झाडापखाला लागेका बेला जीवनजलसमेत नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था भएका अछामसहितका नौवटा दुर्गम जिल्लालाई औषधि खरिद गर्न एक वर्षमा दिइने एकमुष्ठ बजेटभन्दा बढी हो । असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ जनालाई ५० लाख, एक जनालाई ४ लाख, ६ जनालाई ३ लाख, ११ जनालाई २ लाख र ५२ जनालाई १र१ लाख रुपैयाँ सहायता दिएको छ ।
सरकारले सौजन लिम्बु, रामसिंह रावल र गणेश उचैलाई एकरएक लाख, प्रकाश शाहलाई २ लाख, कृष्णनिधि तिवारीलाई ३ लाख, कांग्रेस सांसद प्रेमकिशोर शाह तेलीलाई ५ लाख, लक्ष्मणसिंह खडका, रोहित राजवंशी, तुकबहादुर थापा, हरिबहादुर थापा ९जाजरकोट०, हरिबहादुर देहार, मनक्वारा बिटालु, जनकराज गौतम, विष्णुरुद्र उपाध्याय, पानसरी धराला, उदय चलाउने र भुवनकुमार थारूलाई एक÷एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ ।
यसैगरी शरद रसाइलीलाई ३ लाख, तिलकबहादुर सारुलाई एक लाख, नारायणबहादुर कार्कीलाई ४ लाख, श्यामलाल श्रेष्ठलाई २ लाख, सानुशिवा पहाडीलाई २ लाख, टीकादेवी पालुंगालाई २ लाख, लालबाबुसिंह भुइँहार, दानबहादुर डंगोल, श्रीन्जु अधिकारी, सुरेशकुमार राई, विक्रम खरेल, सुन्दर कार्की, शारदा चौंलागाईं, गोपालबहादुर अधिकारी, कृष्णबहादुर खडका, डोमा शेर्पा, सुदीप थापा, चेतनारायण आचार्य, श्रीधरप्रसाद श्रेष्ठ, माया लामिछाने, दलबहादुर स्याङतान, गंगाबहादुर थापामगर, दीपक देवकोटा, रेखी बीसी, दत्तबहादुर रावल, जनकबहादुर शाह, दीपेश श्रेष्ठ, गीता पोखरेल काफ्ले, जयबहादुर क्षत्री र रुद्रबहादुर बस्नेतलाई एकरएक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ ।